फ्रेवुअरी 11, 2019 फ्रेवुअरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	8 Comments आँप, डा. राम बहादुर बोहरा, फाइदाहरु, स्वास्थ्य
आँप फुल्ने मौसम आउदैछ । आँप कसलाई मन पर्दैन । आँपलाई फलको राजा भनिन्छ । शास्त्रमा यसलाई अमृत फल मानिएको छ । आँप काँचो होस् वा पाकेको दुवैमा औषधीय गुण हुन्छ । पाकेको आँपमा प्रोटिन, बोसो, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, फोस्फोरस, फलाम, भिटामिन ‘ए’, ‘सी’ र ‘बी’ लगायत पाइन्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार, आँपका पाँचै अंग अर्थात् बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल सबै काममा आउँछ । पाकेको आँप गुलियो, वीर्यवर्धक, पौष्टिक, वायुनाशक, कान्तिदायक, शीतल, पित्तनाशक छ । आँपको सेवनले भोक पनि बढ्ने गर्छ । यसले मुटुलाई बलियो बनाउनुको साथै पित्तलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम गर्छ ।
आँपमा प्रोटिन ९.६ प्रतिशत, बोसो ०.१, खनिज पदार्थ ०.३, रेसा १.१, फोस्फोरस ०.०२ र फलाम ०.३ प्रतिशत पाइन्छ । एक सय ग्राम आँपमा करिब ९० क्यालोरी ऊर्जा हुन्छ । हामीले खाने हरेक फलफूल स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो छ ।
आँप खानुका फाइदाहरु
१. आँपमा भिटामिन ए र भिटामिन सी प्रसस्त मात्रामा पाइने र यस्मा प्रसस्त फाइबर हुनाले स्वास्थ्यका लागि फलको राजा मानेको छ ।
२. आँपको सेवन सहि तरिकाले गर्न सकेमा खूनको कमिबाट बचाउन सक्दछ ।
३. आँपमा साइट्रिक एसिड प्रसस्त हुनाले पाचन कृयालाई राम्रो संग सुधार्दछ,रूचि जगाउदछ ।
४. आँपमा ग्लुटामिन नामक एसिड पाइने भएकाले मेमोरि पावर बढाउदछ । आँपमा अन्य भिटामिन हुनाले रोग प्रतिरोधक शक्ति पनि बढाउने काम गर्दछ ।
← प्यारासुटले कसरी काम गर्छ ?
मानिसले गरेको सानो गल्तीले निम्त्याउछ ठुलो दुर्घटना →
जुन 26, 2019 जुन 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
8 thoughts on “स्वास्थ्यको लागि आँप खानुका फाइदाहरु”
Pingback:फापर र यसका फाइदाहरु
Pingback:भिंडे खुर्सानी र यसका फाइदाहरु
Pingback:जान्नुहोस ! यस्ता छन् बाँसको तामा खानुका फाइदाहरु
Pingback:यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि एभोकाडो खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
Pingback:यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि हरियो धनियाका फाइदाहरु, जानी राखौ